The Official Home of YIFY Movie Torrent Downloads - Page2of 61 - Download Torrent Movies and TV shows
18+ Sleeping Beauties 2017
ဒါမျိုး ၂၁+ ကားကကြည့်ရခဲတယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ၂၁+ မော်ဒယ်တွေ အားဖြည့် သရုပ်ဆောင်ထားလို့ပါပဲ။ ရုပ်ရည် ဘာ ညာ အနေထား ပြောစရာမလိုတဲ့အပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလေးဂရောင်း ကပျိုမဒီတွေဆိုတော့ သိလောက်ပြီပေါ့။ အဓိကက Aria Alexander ပဲ။ File Size : (700 MB) and (280 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1hr 21min Format
Download 18+ Sleeping Beauties 2017
Dark Side Production မှတင်ဆက်သည်။ ကိုရီးယား 18+ Erotic ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကျကျနနနဲ့ တင်ဆက်ထားတာပါ။ Uncut Version ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဇာတ်လမ်းသွားလဲ ရှည်ကြာပြီး ၂ နာရီကျော်ကြာမြင့်ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ရမ္မက်တွေကြားက မေတ္တာတရားအကြောင်းတွေကို ပုံဖော်ထားပြီး မင်းသမီးတွေလဲ လန်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုပံ့ပိုးသရုပ်ဆောင်ရာမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေဖြစ်နေတာမို့ မိသားစုနဲ့မကြည့်သင့်သလို Not4Kid ဇာတ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ File size…(1.1 GB) and (600 MB) Quality…HD-Rip 720p Format…mp4 Duration….02:14:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub)
Download 18+ Healing Mate 2014 Uncut Version
Posted in 18+, Chinese, Drama, Korea, Romance
ImMATURE Storyline A 5-episode coming-of-age story about the many first adventures inayoung man’s life. Dhruv is 16, and inahurry to grow up. Withalittle help from his school friends, the wannabe bad-boy Kabir, and the
Download ImMATURE 2019
18+ Jan Dara The Beginning
Jandra = အမှိုက်ကောင်လေး သင် ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖခင်မေတ္တာဟာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံး နားလည်အောင် သိထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မွေးကတည်းက မိခင်ဆုံးပါးသွားပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ မုန်းတီးခြင်းကိုခံ ခဲ့ရတဲ့ ဂျန် အဘွားဖြစ်သူရဲ့ ကယ်တင်မှုကြောင့် မွေးမွေးပြီးခြင်း အသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့ရတဲ့ဂျန် မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ညီမ၀မ်းကွဲ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် လူလားမြောက်ခဲ့ရတဲ့ ဂျန် ဆိုတဲ့ကောင်လေး ၁၉၁၅ ခုနှစ် မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ညတစ်ည ဘန်ကောက်မြို့ ဗလန်ပူးအိမ်တော်ကြီး မှာ ပျားပန်းခေတ်မျှအလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားများနဲ့ မခံမရပ်နိုင်နာကျင်မှုကို အံတုပြီး ဇာတ်ကားအဆက်တွေကိုကြည့်ချင်ရင်
Posted in 18+, Chinese, Korea, Romance, UNCENSORED
18+ Utopians 2015
Utopians ကားဟာ ၁၈+ကားတကားဖြစ်ပါတယ် ၁၈+ဆိုပေမယ့် အခုခေတ်လူငယ်တွေမမှားသင့်မှားအပ်တာတွေ မစူးစမ်းသင့်တာတွေကို message ပေးတဲ့ကားလို့ပြောတာပိုသင့်တော်ပါတယ် Drama ကားတကားပါပဲ ဒါပေမယ့် heterosexuality…bisexuality.. homosexuality…ဆိုတဲ့ အပိုင်းသုံးပိုင်းလုံးကို ထည့်သွင်းရိုက်ပြထားတာကြောင့် ၁၈+ ကားတကားလို့ ကျနော်အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာပါ အဓိကကတော့ ပညာပေးကားအနေနဲ့ ရိုက်ပြထားတဲ့ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားချစ်သူတွေ….မင်းသားက ဒသနိကနယ်ပမယ်မှာ အတွေးလွန်ပြီးတော့ စူးစမ်းလေ့လာချင်သူတဦး… သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားထဲကို သမရိုးကျဇာတ်လမ်းတွေအတိုင်းပဲ ကြားလူတယောက်ဝင်လာပါတယ်…သူကတော့ အဲ့ဒီစုံတွဲရဲ့ စာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာပဲဖြစ်တယ်….ကျောင်းဆရာကလည်း စာစသင်တဲ့အချိန်ကတည်းက သူ့ဖာသာသူ Homosexuality အမျိုးအစားပါလို့ File size…(850MB) Quality…Blu-Ray
Download 18+ Utopians 2015
18+ Young People Fucking 2007
Dark Side Production မှတင်ဆက်သည်။ IMDb 6.3) ဒီဇာတ်​ကား​လေးက​တော့ လိင်​ကိစ္စတက်​ကြွ​နေဆဲဖြစ်​တဲ့ လူငယ်​​လေး​တွေရဲ့ သဘာဝကို ဟာသ​နှောပြီး ရိုကြ်​ပထားပါတယ်​ ဇာတ်​ကားထဲမှာ စုံတွဲ ၅တွဲပါဝင်​ထားပြီး တစ်​တွဲနဲ့တစ်​တွဲရဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံဖြစ်​ပုံ​လေး​တွေကလည်း မတူညီကြပါဘူး ။ ပြီး​တော့ ဝမ်းသာစရာက….. ဇာတ်​ကားတစ်​ကားလုံးကလဲ ကုတင်​​ပေါ်မှာတင်​ အဆုံးသတ်​သွားတာဆို​တော့ကာ…….. ၁)Friends ပထမစုံတွဲက သူငယ်​ချင်း​တွေပါ ။ငယ်​ငယ်​တည်းက ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်​ချင်း​တွေဖြစ်​ပြီး လိင်​ကိစ္စအာသာ​ပြေဖို့ သက်​သက်​သာ ဆက်​ဆံကြမှာပါ။ ၂)Room-mate ဒုတိယအတွဲက​တော့ ဆန်းကျယ်​စွာပါပဲ လူ ၃​ယောက်​ ဖြစ်​​နေတာပါ။ သူ့​ကောင်​မ​လေးကို
Download 18+ Young People Fucking 2007
Posted in 18+, Comedy, Drama, Romance, UNCENSORED
18+ Sex and Zen 1991
ဟောင်ကောင် Erotic , Comedy ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Uncut Version ကိုစာတန်းထိုးထားတာမို့လို့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသာကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေထွက်ထားပါသေးတယ်…မှာသွားကြည့်ပါ။ File size…(800MB) Quality…BR-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:34:07 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
18+ The Concubine 2012
ငယ်စဉ်ကအတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့သော်လည်း ဖခင်အမတ်ကြီး အသတ်ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက် မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့သူ ဟွယွန် ဟွယွန်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားသော်လည်း လက်လွတ်ခဲ့ရပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာမှ မရမကယူချင်နေတဲ့ ဆောင်ဝမ် အမတ်ကြီးသမီးနဲ့ချစ်မိလို့ ယောက်ကျားစစ်စစ်ဘ၀ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး လက်စားချေဖို့အတွက် နန်းတွင်းထဲကို ကုန်းကုန်းအဖြစ် ၀င်ရောက်လာသူ ကွမ်ယို အာဏာမက်မောလွန်းတဲ့အတွက် လက်ရှိဘုရင်ကိုသတ်ပြီး သားဖြစ်သူ ဆောင်ဝမ်ကို ရုပ်သေးဘုရင်အဖြစ် အသုံချပြီး နန်းတော်ကိုချယ်ခြယ်နေတဲ့ မယ်တော်ကြီး အဲဒီ ဇာတ်ကောင်တွေဦးဆောင်တဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ အာဏာ၊ တဏှာ၊ အချစ်၊ မိခင်မေတ္တာနဲ့ လက်စားချေမှုတို့ကို ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ အာဏာဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက်စေစားနိုင်လဲ၊
Download 18+ The Concubine 2012